चुरोटको ठुटोबाट सिंहदरबारभित्र आगलागी ! « Deshko News
चुरोटको ठुटोबाट सिंहदरबारभित्र आगलागी !
सिंहदरबारस्थित नेपाल टेलिभिजन नजिक हुलाक सेवा विभागको भवनमा आइतबार साँझ आगलागी भएको छ । प्रहरीका अनुसार भवनको भर्याङतर्फको सिरानतलामा आगलागी भएको हो ।
साँझ ७ः२५ बजे सुरु भएको आगलागी ७ः५० नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीबाट प्यासेजमा रहेका केही कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । मानवीय क्षति भने भएको छैन । प्रहरीका अनुसार ननिभेका चुरोटका ठुटा डस्टबिनमा राखिएको फोहोरमा सल्किँदा आगलागी भएको हो ।
डस्टबिनमा चुरोटको ठुटा फाल्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा खुल्न सकेको छैन । घटनास्थल पुगेका महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरी निरीक्षक युवराज तिमल्सिनाले चुरोटको ठुटा फोहोरमा सल्किँदा आगलागी भएको बताए । ‘आगो सल्किएको खबर पाउनासाथ प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो ।
आगलागी हुनासाथ सिंहदरबार परिसरस्थित प्रहरी गणका सुरक्षाकर्मी र दमकल घटनास्थल पुगेको थियो । तर, आगो नफैलिएका कारण दमकलको पानी प्रयोग भएन । प्रहरीले बाल्टिनकै पानी प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अगलागी भएको भवनमा संसद् भवन निर्माण सचिवालय निर्माणको कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बैकको शाखा कार्यालय छ । सबैभन्दा तल्लो तलामा चमेनागृह छ । नयाँ पत्रिका दैनिक